Mampahafantatra ny haitao amin'ireo ankizy kely AKA - Iphone
Tsy hisokatra ny fampiharana pandora
manakana ny nomeraonao amin'ny iphone 6
ahoana no hamerenako ny sariko
Mampahafantatra ny haitao amin'ireo ankizy kely AKA
Introducing Technology Kids Aka Small Humans
Ny teknolojia dia miparitaka be amin'ny fiainan'ny zanatsika amin'izao fotoana izao ka na ny kilalao natao ho an'ny zazakely aza dia misy ny teknolojia marani-tsaina. Misy kilalao ho an'ny zazakely izay mampianatra azy ireo hanao coding! Rehefa miresaka aho fampahafantarana ny teknolojia amin'ny ankizy , Ny tiako hambara takelaka, fitaovana tahaka ny takelaka, iPods, iPhones, mpilalao MP3, ary ny fitaovana rehetra misy fàfana.
Fa maninona no zava-dehibe io?
Mampahafantatra ny ankizy ny teknolojia dia zava-dehibe satria mbola kely izy ireo dia hampiasan'izy ireo ary atrehin'izy ireo eo noho eo. Sivy volana ny zandriko indrindra, ary efa fantany fa ny telefaonin'i Neny dia milamina kokoa noho ny kilalao rehetra ananany. Nahazo fakana sary an-tsaina finday kilalao aza aho fa tsy hikasihany andry folo metatra.
Manomboka mampiasa ny sekoly sasany takelaka ao amin'ny akanin-jaza sy kilasy voalohany , Ka ny fahalalana ny fampiasana tablette dia hevitra tsara ho an'ny ankizy. Fanampin'izay, ny teknolojia dia mety hampianatra be! Ny zanako vavy tao amin'ny akaninjaza dia tsy maintsy nalefa tany an-tsekoly ho an'ny fampiasana solosaina ny headphones azy, ary azo antoka fa tsy zavatra vita izany fony tany amin'ny akanin-jaza ny zokiko indrindra folo taona lasa izay.
Rahoviana no hanombohana fanomezana ny ankizy Noisemakers azo entina
Saika, saika ny kilalao rehetra dia mpamoaka horonantsary azo zakaina amin'izao fotoana izao, saingy ny teknolojia marani-tsaina no tiako holazaina. Nanomboka foana aho nandritra ny taona nahatanoran'ny zaza, rehefa antitra afaka miresaka sy manana fahaizana moto tsara izy ireo. Tsy zavatra kasaiko hatao ity. Ny ankamaroany dia satria efa tratry ny tsy fahitan'izy ireo ny olon-drehetra ao amin'ny fianakaviana izy ireo, ka nomeko azy ireo ny fitaovany.
Ny tolo-kevitro dia ny hividy fitaovana efa niasa na hand-me-down azy ireo hanombohana. Amin'ity fomba ity, ny vola lany dia tsy hampiasa vola loatra satria lozam-pifamoivoizana SITRAPON'I mitranga rehefa fampahafantarana ny teknolojia amin'ny ankizy . Ny iPod novidiko voalohany dia nampiasaina $ 70 tamin'ny eBay, ary tonga tany am-ponja izy io. Tsy maintsy namerina azy aho, mba hahafahako manavao ny iOS ary nilelaka ilay zavatra! Natobin'ilay zanako vavy tao anaty rano mangatsiaka kokoa izany, ary noheveriko fa mpitrandraka rano. Niezaka nanamaina azy aho ary namela azy hipetraka mandritra ny tapa-bolana, ary niverina tamin'ny fomba mahagaga. Ny zanako vavy koa nilatsaka ary nanipy azy an-tapitrisany.
Fantatrao koa ve izany an iPhone taloha mety ho lasa iPod fitaovana eo no ho eo? Ka raha nanatsara ny iPhone-nao ianao, nefa manana fitaovana efa be taona sy voaloa, omeo ny ankizy! Ny sisa ataonao dia ny mampihetsika ilay fitaovana misy karatra SIM ao anatiny, ary amin'ny alàlan'ny fampihetseham-batana, ny tiako holazaina dia ny fametrahana azy fa tsy manome drafitra finday azy. Azonao atao ny mampiasa karatra SIM mety amin'ity fizotrany ity, ary mila miala fotsiny amin'ilay efijery fampidirana ianao. Vita izay, esory ny karatra SIM, ary voila! IPod eo noho eo!
Iza amin'ireo fitaovana ampiasaina?
Betsaka ny fitaovana any ivelany izay mifantoka manokana ho an'ny ankizy, toa ny LeapPad sy VTech, izay manana fiasa tsara sy mampianatra ny ankizy kilalao fanabeazana. Saingy manana olana iray lehibe indrindra amiko izy ireo: tsy miaraka amin'ny lalao maro izy ireo, angamba iray na roa raha INDRINDRA, ary ny vidin'ny lalao fanampiny dia $ 15 ka hatramin'ny $ 20. Ka na dia mety ho mora kokoa aza ilay fitaovana amin'ny voalohany dia mandoa ny lalao ianao amin'ny farany. Ny tsy fahampian'ny lalao misy dia midika koa fa ny ankizy dia mihalehibe azy ireo haingana kokoa ary mankaleo azy ireo haingana.
Manoro hevitra ireo fitaovana Apple toa ny iPads, iPods aho, na iPhones mora vidy, ary koa ny fonosan'ny ankizy Kindle Fire. Mety ho lafo kokoa ireo amin'ny voalohany, fa manana TONS lalao sy fampiharana maimaim-poana. Ny ampahany tsara indrindra dia izy ireo mitombo miaraka amin'ilay zaza . Rehefa mihalehibe lalao iray na iray hafa ny ankizy dia afaka manatsara mora foana ianao amin'ny vidiny kely. Nandany vola $ 20 angamba aho tamin'ny rindrambaiko tato anatin'ny dimy taona lasa ho an'ny fampiharana tena kalitao ho an'ny zanako.
Ny zavatra hafa momba ny fividianana apps ho an'ny Apple na Kindle dia, rehefa avy mividy azy ireo ianao dia manana azy ireo ary azonao apetraka amin'ny fitaovana ho avy koa. Manana iPhone 5 mila bateria vaovao aho, izay azoko soloina lavitra noho ny vidin'ny fitaovana vaovao, ary azoko omena ny zandriko indrindra rehefa vonona izy. Voaloa io, nanana fiainana mahasoa izy, ary manana fampiharana efa tonta efa tonta miandry ny fisintomana aho.
Mampiasà fampiharana mety amin'ny vanim-potoana… Tsy misy antso ho an'ny ankizy kely, azafady.
Ny zava-dehibe indrindra momba fampahafantarana ny teknolojia amin'ny ankizy dia ny hitazomana ny taonany mety! Azonao atao ny manivana apps ho sahaza ny sokajin-taonan'ny zanakao ho alaina sy milalao. Misy taonina fampiharana fanabeazana maimaim-poana na ambany sarany azo ampiasaina amin'ny sokajin-taona rehetra. Manana rindrambaiko iray ho an'ny Pre-K izay manana fifandraisana fitiavana / fankahalana aho. Ity fampiharana ity dia mihira ny hira ABC miverimberina, izay tiako satria tsy marary tenda (tsy toa ahy), ary mampianatra ny zanako ny ABC koa izany. Manana kinova maimaimpoana voafetra izy io, saingy nandoa ny $ 1,99 aho hanalana ny lalao manampy amin'ny fampianarana litera. Ka maninona no halako izany? Satria tsy maintsy mihaino ilay hira ABC miverimberina foana aho!
Fantatrao tsara rehefa tonga ny fotoana
Amin'ny maha ray aman-dreny anao dia fantatrao tsara indrindra rehefa tonga ny fotoana hampahafantarana ny zanakao amin'ny teknolojia. Nozaraiko ny toro-hevitra vitsivitsy izay tsapako fa tena miasa tsara rehefa tonga ny fotoana, ary mamela ahy hanana teknolojia mitombo miaraka amin'ny zanako koa izany. Mampahafantatra ny ankizy ny teknolojia tokony ho mahafinaritra SY fanabeazana ho an'ny zanakao, ary miaraka amin'ny fitaovana mety, hahazo taona ampiasaina ianao.
Mamelà ahy hiteny aminao, miditra ny iPod zanako vavy tena mora ampiasaina mandritra ireny dia mitaingina fiara lava ireny!